Harare - definition of Harare by The Free Dictionary
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary 12,999,414,577 visitors served
Le MDC avait annonce, la semaine derniere, qu'il organiserait une serie de manifestations qui devaient debuter vendredi a Harare et qui furent annulees jeudi a la suite d'une interdiction de la police.
On October 16, 2017, the Harare City Health Department (HCHD) in Zimbabwe identified a suspected typhoid fever (typhoid) case in a resident of Harare's Mbare suburb.
(TAP)- Streets were mostly quiet on Tuesday in Zimbabwe's capital Harare and second city Bulawayo as banks, schools and businesses stayed shut, a day after deadly protests over economic hardship and a sharp increase in the price of fuel.
Summary: Harare [Zimbabwe], Nov 8 (ANI): Two buses collided with each other in southeast Zimbabwe, killing 47 people.
HARARE -- A government crackdown in Zimbabwe after Monday's elections has prompted international calls for restraint.
LAHORE -- Pakistan's departure to Bulawayo from Harare for the upcoming One-day International series was delayed due to financial issues being faced by Zimbabwe Cricket (ZC), Dawn learnt on Tuesday.